“Guddiga doorashooyinka iyo go?aanka xukuumadduba waa sharci darro” Prof. Dalxa oo ka mid ah Guddi baarlamaani ah oo loo saaray arrinta. – Radio Daljir
Muqdisho, April, 27- Prof. Maxamed Cumar Dhalxa ayaa dhaliilay mawaaqifta siyaasadeed ee ay qaateen hoggaanka hay’adaha federaaka iyo tallaabooyinka ay ku maaraynayaan marxaladda kala-guurka.
Prof. Dhalxa oo ah xildhibaanka tirsan golaha barlamaanka ayaa waraysi gaar ah oo uu maanta (Arbaca) siiyay Daljir waxa uu sheegay in labada dhinac ee dawladda iyo guddiga qaban-qaabada doorashooyinka dalka ay khaldan yihiin. Waxa uu sheegay in go’aannada iska hor-imaanaya ee ay qaateen uunan sharcigu ogollayn, maaddaama ay si iskood ah go’aannada u qaadayaan. Sidoo kale waxa uu arrin aan waxba ka jirin ku tilmaamay eedeaynta ay midiba ta kale ku eedayanaso in ay sharicga hareer maratay, laakiin labaduba ay khaldan yihiin taasna aan laga ogolaan doonin dibna la isgu laabanayo si khaladkaasi loo saxo.
Xildhibaanka ayaa dhanka kale sheegay in xubnaha baarlamaanka ee ka madax-banaan khilaafka jira ay wadaan sidii sharciga loogula xisaabtami lahaa labada dhinacba, maddaama ay wadaan waxyaabo burburinaya axdiga federaalka KGM ah.
Prof. Dhalxa oo horay u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka afhayeenka barlamaanka federaalka ayaa caddeeyay in isaga iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ayan aqoon saneyn gudiga loogu magac-daray qaban-qaabada doorashooyinka qaranka madaama, sida uu hadalka u dhigay, aan la horkeenin baarlamaanka tasoo fududeeyn karta ama xayiri karta howsha ay qabanayaan lakiin hadda uu qof shakhsi ah iska magacaabay.
Dhalxa ayaa ka mid ah guddi xildhibaanno ah oo loo xilsaaray inay u kale dabqaadaan dhinacayada ku muransan xallinta mushkiladda kala guurka iyo doorashada.
Daljir Bossaso http://daljir.com/